Iyo beta 1 yewatchOS 3.2.2 uye tvOS 10.2.1 yatove mumaoko evanogadzira | Ndinobva mac
WatchOS 1 uye tvOS 3.2.2 beta 10.2.1s zvino iri mumaoko evanogadzira
Pave nemaawa makumi maviri nemana kubvira kuvhurwa kwemhando dzepamutemo dzeMacOS, iOS, watchOS uye tvOS, kuti ivo vagadziri vatove neyokutanga beta vhezheni dziripo. Mune ino kesi isu tiri kutaura nezve iyo watchOS 1 uye tvOS 3.2.2 beta 10.2.1 Uye zvakare neruzivo rwekuda kutaura kuti mune nyaya yewatchOS zvinoita sekunge vakadarika nhamba, kubvira nezuro vakaburitsa vhezheni yekupedzisira yeOSOS 3.2 uye nhasi yaive dzidziso 3.2.1 asi izvi handizvo. Kunze kweichi chidiki chisina kukosha, tave kupera macOS beta ikozvino uye nemamwe ese ekutanga vhezheni dzave kutowanikwa kune vanogadzira vane zvishoma zvinochinja shanduko.
Iwo matsva mavhezheni anowedzera iwo chaiwo hunhu mukuchengetedza uye kugadzikana kwesisitimu. Izvi zvakajairwa kutarisisa kuverenga uye ndechekuti icho chinhu icho Apple yanga ichiita nekusingaperi, kana iyo nhamba ikachinja kana zvigadziridzo zvikawedzerwa kumushandisi asi kana iine nzvimbo yechitatu yedesimali, zvishoma zvitsva zvinopa iyo vhezheni nyowani. Nezvo isu hazvireve kuti iwo haasi akakosha ekuvandudza, nekuti zviputi uye matambudziko eiyo vhezheni yapfuura anogadziriswa asi haape zvinhu zvitsva maererano nemabasa.
Mune ino kesi, isu tiri kutarisana neyekutanga beta vhezheni mushure mekuvhurwa kweshanduro dzepamutemo zuro uye vanogadzira vanonyoresa vanogona kuwana idzi shanduro nyowani kuburikidza neOTA yeApple Watch (iyo inoda kuve neiyo beta yakaiswa pane iyo iPhone) uye yeApple TV. Ngativimbei kuti mangwana shanduro dzeruzhinji dzichasunungurwa kune vashandisi vanotevera chirongwa cheveruzhinji beta uye kuti beta ye macOS Sierra inosvikawo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple TV » WatchOS 1 uye tvOS 3.2.2 beta 10.2.1s zvino iri mumaoko evanogadzira
Iyo 2016 MacBook Pro neTouch Bar yakadzoreredzwa ikozvino inowanikwa kuSpain
MacOS Sierra 1 beta 10.12.5 ikozvino inowanika kune vanogadzira